Ruushka iyo Sacuudiga Oo Gaadhay Heshiis Horudhac Ah - Ilays News
Ruushka iyo Sacuudiga Oo Gaadhay Heshiis Horudhac Ah
June 3, 2020 admin1
sacuudi Carabiya iyo Russia ayaa gaadhay heshiis horudhac ah oo muddo bil ah lagu dheereynayo dhimis ay ku sameeyeen wax soo-saarkooda saliidda caydhiin, si sare loogu qaado qiimaha saliidda caalamka.
Sacuudiga ayaa hoggaamiya ururka OPEC, halka Russia ay hoggaamiso dalalka aan xubnaha ka ahayn ururkaas ee saliidda soo-saara, waxaana labada dhinac la isku yiraahdaa OPEC+.
OPEC+ ayaa isku raacay inay wax soo-saarkooda saliidda ka dhimaan 9.7 milyan oo barmiil maalinkii ama 10% guud ahaan wax soo-saarka caalamka, bilaha May iyo June, si qiimaha sare loogu qaado kadib markii cudurka Coronavirus uu hoos u dhigay qiimaha.
“Sacuudiga iyo Ruushka waxay hadda isku raaceen in heshiiskaas lagu daro bil kale oo dheeri ah,” waxaa sidaas yiri il-wareed ka tirsan OPEC oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters.
“Heshiiskan ayaa waxaa dhaqan-galkiisa shuruud ah in dalalkii aan u hogaansamin heshiiskii May ay dhimaan wax soo-saarkooda bilaha soo socda,” ayuu yidhi.
Dalalka Iraq iyo Nigeria oo xubno ka ah OPEC ayaa muujiyey inaysan sidii la rabay ugu hoggaansamin wax soo-saar dhimistii May. Sidoo kale Kazakhstan ayaan si buuxda uga soo bixin qodobada heshiiska.
Ruushka iyo Sacuudiga ayaa horraantii sanadkan waxaa dhex maray dagaal dhinaca saliidda ah, waxaana suuqyada caalamka ay kusoo fasaxeen saliid badan ayaga isku xumeynaya, taasi oo qiimaha saliidda dhulka gaysay.